Wasiirka Maaliyadda, Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya oo Heshiis Is Faham La Saxiixday Dowladda Denmark
Wasiirka Maaliyadda, Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya oo Heshiis Is Faham La Saxiixday Dowladda Denmark.
Axad, 09, Dec, 2012…Wasiirka Maaliyada, Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane Maxamuud Xasan Suleemaan ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Wasiirka ayaa ka mid ahaa waftigii Madaxweynaha u raacay dalka Turkiga, wasiirka ayaa safarkiisa Turkiga ka dib soo maray magaalada Nairobi isagoona halkaas kulama kula soo qaatay xubno ka tirsan Beesha Caalamka.
Wasiirka ayaa kulan gaar ah la qaatay safiirka dalka Denmark u fadhiya Kenya waxayna labada dowladood kala saxiisdeen heshii is faham ah, waxaaan dowlada Denmark ugu deeqday dalka Soomaaliya Shan Milyan oo doolar ( 5,000,000) lacagtaas oo dowladda Soomaaliya ku bixinayso adeegyada bulshada.
Kadib booqashadii uu ku soo kala bixiyey dalalka Turkiga iyo Kenya ayaa wasiirku ku soo guryo noqday dalka. Waxaana garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Xildhibaano iyo dadweyne aad u fara badan, Wasiirka ayaa warfidiyeenada kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha isagoona ka warbixiyay safarkiisa.
“ Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta dalka dib ugu soo laabto, Waxaan ka mid ahaa waftigii Madaxweynaha u raacay dalka Turkiga, booqashadii turkiga kadib waxaan shaqo gaar ah u soo maray dalka Kenya” ayuu yiri wasiirku
Ugu danbayntii Wasiirka Maliyadda ayaa noqday wasiirka ugu shaqada badan golaha wasiiradda oo jiray in ka yar mudo bil ah wuxuuna qaaday talaabooyin kala duwan oo shacabku aad u soo dhaweeyeen. Waxaana ka mid ahaa joojintii lacagihii kala duwanaa oo lagu qaadi jiray Dekeda dhexdeeda iyo isagoo ku amray shaqaalaha wasaaradda maaliyadda inaysan wax lacag ah ka qaadi karin Ex-Kontrool Afgooyo ka hor intaan la qaadin Isbaaradaas.